थाहा छ ? महिलाले पुरुषमा खोज्छन् यी ५ कुरा – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /रोचक/थाहा छ ? महिलाले पुरुषमा खोज्छन् यी ५ कुरा
7854minutes read
महिला र पुरुषको विचको स म्बन्धको शुरुवात सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । महिला सामान्यतया पुरुषमा केही कुरा खोज्छन् । यी कुरा पाए भने महिला पुरुषसँगको सम्बन्धमा खुशी र सन्तुष्ट रहन्छन् ।
मुस्कान– राम्रो लुक र पहिरन पछि महिलालाई चाहिन्छ हँसिलो अनुहार । कुनै पनि पुरुष हँसिलो अनुहारसहित प्रस्तुत हुन्छ भने उप्रति महिला आकर्षित हुन्छे ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
यो पनि- ५५ वर्षे शाहरूखको ‘दीवाना’ देखि ‘जिरो’सम्मको यात्रा
बलिउडमा ‘किङ अफ रो मान्स्’ले परिचित अभिनेता शाहरूख खान ५५ वर्षका भएका छन्। उनका प्रशंसकका लागि उनको जन्मदिन कुनै उत्सवभन्दा कम हुँदैन। हरेक वर्ष हजारौंको संख्यामा शाहरूखका फ्यान उनको जन्मदिनको दिन मुम्बईस्थित उनको निवास ‘मन्नत’मा एक झलक हेर्न घण्टौंसम्म पर्खिरहन्छन्।
शाहरूख पनि उनीहरूलाई निराश नपारी प्रत्यक्ष अभिवादन फर्काउँछन्। तर यस वर्ष कोरोना महामा रीले गर्दा उनी आफ्ना प्रशंसकसँग डिजिटल माध्यमबाट जोडिए।टेलिभिजन शो ‘फौ जी’ र ‘सर्कस’ हुँदै शाहरूखले आफ्नो अभिनय करियरको सुरूवात गरेका थिए। ३० वर्ष लामो फिल्मी करियरमा शाहरूखले कयौं स्मरणीय भूमिकाहरू निर्वाह गरेका छन्।
उनी नकारात्मक, सकारात्मक तथा रोमा न्टिक सबै भूमिकामा अब्बल रहे।
दिव्या भारती तथा ऋषि कपुरको साथमा ‘दीवाना’ सिनेमाबाट उनले बलिउडमा कदम राखे। सन् १९९३ को त्यो समयमा उनले यस्ता केही सिनेमा गरे जुन सो समयका हिरोहरू गर्दैनथे। शाहरूखले त्यसलाई बेवास्ता गरे जुन उनको सुपरस्टार बन्ने बाटोका लागि महत्वपूर्ण प्रमाणित भयो।निर्देशक अब्बास-मस्तानको ‘बाजिगर’ शाहरूखको एउटा त्यस्तै सिनेमा हो। यश चोपडाको ‘ड र’ सिनेमामा शाहरूख खान कुनै पनि हदसम्म जानसक्ने एकतर्फी माया गर्ने पा गलप्रेमीको भूमिकामा देखिए।
सिनेमा विज्ञ तथा इतिहासकार अमृत गंगर भन्छन्, ‘ बाजिगर सिनेमाबाट शाहरूखले एक चतुर र शैतानी हिरोलाई प्रस्तुत गरे। यही वर्ष उनले ‘डर’मा एक नकारात्मक भूमिकामा काम गरे जो परम्परागत हिन्दी सिनेमाको हिरोका लागि वर्जितजस्तै थियो।’
तर शाहरूखले यथास्थितिबाट हटेर नकारात्मक भूमिकालाई निरन्तरता दिदैं ‘अन्जाम’ सिनेमामाको अर्को पागलप्रेमीको भूमिका निभाए ।शाहरूखले ‘बाजीगर’ सिनेमाका लागि फिल्मफेयरमा पहिलोपटक उत्कृष्ट अभिनेताको अवार्ड पाए भने त्यही ‘अन्जाम’मा गरेको नकारात्मक भूमिकाका लागि उत्कृष्ट खलनायकको अवार्ड पाए। अमृतका अनुसार दुई फ्रेन्च र एक रूसी उपन्यासमा आधारित सिनेमाको शाहरूखको करियरमा अभिनेताका रूपमा ठूलो योगदान छ।
महान् रूसी उपन्यासकार फ्योदोर दोस्तोवस्कीको १९ औं शदाब्दीको स्मरणीय उपन्यास ‘द इडियट’मा आधारित ‘इडियट’मा शाहरूखले काम गरे। सिनेमालाई सो समयका चर्चित निर्देशक मणी कौलले बनाएका थिए।निर्देशक कौल युवा शाहरूख खानको अभिनय समझदारीबाट यति प्रभावित बनेकी उनी शाहरूख खानसँग सिनेमा बनाउन चाहन्थे। यसले शाहरूखको अभिनय क्षमताको स्तरलाई दर्शाउँथ्यो।
त्यही केतन मेहताको ‘माया मेमसाब’ १९ औं शदाब्दीको फ्रान्सेली उपन्यासकार गुस्ताव फ्लाबेर्टको उपन्यास ‘मदाम बोवेरी’मा आधारित थियो जसमा शाहरूखले महत्वपूर्ण भूमिका निभाएका थिए। सिनेमाबाट उनले अभिनयका लागि तारिफ बटुले।यसै वर्ष ‘दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे’ले आफ्नो रिलिजको २५ वर्ष पूरा गर्‍यो। यो सिनेमालाई हिन्दी सिनेमा उद्योगको सबैभन्दा रोमान्टिक सिनेमा मानिन्छ। सन् १९९५ मा रिलिज भएको सिनेमाले कयौं रेकर्ड तोड्यो र रातारात शाहरूखलाई सुपरस्टार बनाइदियो।
‘शाहरूखको अभिनयमा त्यस्तो केही खुबीहरू थियो जो पहिला देखिएको थिएन। एक किसिमको दम थियो, संवे दनशिलता थियो। ओठमा अनौठो भाव थियो भने संवाद शैलीमा एउटा परीक्षण थियो। एउटा बद मास युवाको बानी पनि थियो। सिनेमाले एउटा नयाँ किसिमको सिनेमालाई जन्म दियो।
जहाँ भारत नयाँ बजार व्यवस्था र उपभोक्तावादका लागि खुलिरहेको थियो भने धेरै भन्दा धेरै मध्यम वर्गीय परिवार विदेश यात्रा गरिरहेको थियो। नयाँ पुस्ता पश्चिमी संस्कृति अपनाइरहेको थियो र पुराना परम्परा परिवर्तन हुने क्रममा थिए। शाहरूख खान यो समयको एउटा प्रतिविम्बात्मक अनुहार बनेर आए’, गंगुर भन्छन्।
‘दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे’को सफलतापछि शाहरूख खान त्यस्ता रो मान्टिक सिनेमाको हिस्सा बने जोबाट उनी ‘किङ अफ रोमान्स’ बने।‘दिल तो पागल है’, ‘परदेश’, ‘कुछ कुछ होता है’ जस्ता सिनेमा उनलाई ‘किङ अफ रो मान्स’ बनाउने सिनेमाको सूचिमा पर्छन्। शाहरूख र काजोलको जोडीलाई दर्शकले खुबै मनपराए।
वरिष्ठ पत्रकार अजय ब्रम्हात्मजका अनुसार यसै समयमा आएको ‘बादशाह’ सिनेमापछि शाहरूख खान ‘बादशाह खान’ वा ‘किङ् अफ बलिउड’को नामबाट बोलाइन थालियो। यध्यपी ‘बादशाह’ सिनेमा फ्लप भएको थियो।त्यसपछि पनि शाहरूख खानको रोमान्टिक अवतार सिनेमाको पर्दामा जारी रह्यो। आदित्य चोपडाको ‘मोहब्बते’मा उनी प्रेमीविरोधी अमिताभसँग भिडे जसलाई दर्शकले खुबै मनपराए।
सन् २००१ मा करण जोहरले अमिताभ बच्चन, शाहरूख खान र नयाँ पुस्ताका ऋतिक रोशनलाई एकसाथ ल्याएर बनाएको ‘कभी खुशी कभी गम’ सिनेमालाई दर्शकले बल्कबस्टर बनाइदिए।सन् १९९५ मा शाहरूख खान निर्देशक-निर्माता प्रेम लालवानीको ‘गुड्डू’ सिनेमाको हिस्सा बने। यो सिनेमाको पैसाले उनले मुम्बईमा आफ्नो पहिलो फ्ल्याट किने। सन् २००१ मा शाहरूखले १३.३२ करोड भारूमा बान्द्राको समुन्द्र किनारमा ‘भिल्ला भियना’ किने जसको नाम उनले ‘जन्नत’ राखे। घर किनेपछि सबै इच्छाहरू पूरा हुँदै गएको भन्दै उनले घरको नाम ‘जन्नत’बाट ‘मन्नत’ राखे।
सन् २०१२ मा शाहरूख यश चोपडाको अन्तिम सिनेमा ‘जब तक है जान’मा देखिए। सिनेमा हिट भयो, केही समयपछि यश चोपडाले यस धर्तीबाट बिदा लिए। यसपछि शाहरूख-यशको जोडीमा विराम लाग्यो।शाहरूख ‘किङ अफ रोमान्स’ बन्नुमा यश चोपडाका सिनेमाका ठूलो योगदान रह्‍यो। यसमा यशका ‘दिल तो पागल है’, ‘वीर जारा’ र ‘ जब तक है जान’ सामेल छन्।
दिलीप कुमारको सन् १९५५ को ‘देवदास’ सिनेमालाई शाहरूखले सन् २००३ मा संजयलिला भन्सालीको निर्देशनमा पुनः ताजा गराइदिए। सिनेमाले खुबै प्रशंसा पायो। ‘कल होना हो’, ‘चलते-चलते’, वीर जारा’ जस्ता सिनेमाले शाहरूखको रो मान्टिक छवि कायमै राखिरह्‍यो।सन् २००६ मा उनी नयाँ पुस्ताका लेखक-निर्देशक फरहान अख्तरको ‘डन’ सिनेमामा काम गरे। सिनेमा अमिताभ बच्चनको सन् १९७८ को सुपरहिट सिनेमा ‘डन’को रिमेक थियो। दर्शकले शाहरूखलाई पुनः एकपटक नकारात्मक भूमिकामा साथ दिए। यो सिनेमा शाहरूखका लागि पुनः रोमान्टिक छवि बदल्ने सिनेमा बन्‍यो।
निर्देशक करण जोहर, शाहरूख खान र काजोलको जोडी पुनः ‘माई नेम इज खान’बाट पुनः एकसाथ आए। सिनेमामा शाहरूख खान एस्पर्गर्स सिन्ड्रोमसँग संघर्षरतः रिजवान खानको भूमिकामा आए। सन् २०१० को यो सिनेमालाई पनि अमृत गंगर प्रासंगिक मान्दछन्।‘यो सिनेमामा शाहरूखले रिजवान खानको भूमिकामा अभिनेताको क्षमता देखाएका छन्। यो एउटा मेलोड्रामा थियो जसले विभिन्न देश, महाद्वीप र धर्मलाई दर्शाउँदै मानवतावादी सन्देशसँगै सहनशिलता र एकताको सन्देश दिन्छ। सारा विश्व कोरोनाको प्रभावित भइरहेको र अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुन लागि रहेको आजको सन्दर्भमा यो सिनेमा आज पनि सान्दर्भिक छ’, उनी भन्छन्।
बलिउडका तीन खान शाहरूख खान, सलमान खान र आमिर खान सन् २०१५ मा ५० वर्ष लागेका थिए। यो हिन्दी सिनेमाको पहिलो त्यस्तो पुस्ता थियो जसले ५० को उमेरमा पनि हिरोको भूमिकामा निभाइरहेका छन्। उनीहरू हिरोइनसँग रोमान्स् गरिरहेका छन् र दर्शकलाई यसको मतलब पनि भइरहेको छैन।
शाहरूख खान र काजोल सन् २०१५ मा पुनः रोहित शेट्टीको ‘दिलवाले’बाट एकसाथ आए। यो सिनेमाले उनीहरूका सिनेमाले पहिले देखाउने जादु देखाउन सकेन।सन् २०१६ मा नयाँ पुस्ताका निर्देशक मनीष शर्मा निर्देशित ‘फ्यान’मा शाहरूखले आफ्ना फ्यानको भूमिमामा काम गरे। दर्शकलाई शाहरूखको यो बदलिएको रूप मनपर्‍यो।
त्यसपछि सन् २०१७ मा शाहरूखले राहुल ढोलकिया निर्देशित ‘रईस’मा काम गरे। यसमा उनी आफ्नो रहँदै आएको छविभन्दा एकदम फरक भूमिकामा थिए। उनी नयाँ पुस्ताको कलाकार नवाजउद्दिन सिद्दिकीसँग आए, दर्शकले यसलाई पनि माया गरे।
सिनेमाका संवाद हिट भए। यही वर्ष उनी अभिनित ‘हैरी मेट सेजल’ आयो। अर्को वर्ष सन् २०१८ मा आनन्द एल रायको निर्देशनमा ‘जिरो’ रिलिज भयो। दुबै सिनेमालाई दर्शकले मनपराएनन्।‘शाहरूखले आफ्नो करियरमा बहुमुखी प्रतिभा देखाउँदै विभिन्न भूमिका र शैलीबाट आफूलाई एउटा राम्रो अभिनेताको रूपमा सावित गरे र सुपरस्टार बने।